सर्वश्रेष्ठ गुगल वेब स्क्र्यापर - Semalt विशेषज्ञ
सर्वश्रेष्ठ गुगल वेब स्क्र्यापर - Semalt विज्ञ
Gitorious, GitLab, र BitBucket जस्तै, GitHub एक राम्रो-ज्ञानी नियन्त्रण प्रणाली हो जुन तपाईंको डाटालाई पढ्नयोग्य र स्केलेबल फाराममा बचत गर्दछ। GitHub ले दुई प्रकारका योजनाहरू प्रदान गर्दछ: नि: शुल्क भण्डारहरू र सशुल्क रिपोजिटरीहरू। यो दुनिया भर मा १ 15 करोड भन्दा बढी सक्रिय उपयोगकर्ताहरु र करीव million 56 मिलियन भण्डारहरु को दाबी गर्दछ।
GitHub प्रयोग गर्नको लागि प्राथमिक कारणहरू:
१. तपाईंको खुला स्रोत परियोजनाहरूमा योगदान:
GitHub तपाईंको मनपर्ने खुला स्रोत प्रोजेक्टहरूमा योगदान पुर्‍याउँछ र धेरै समय र ऊर्जा बचत गर्दछ। यदि तपाईंको प्रोजेक्टमा विकिस वा मुद्दा ट्र्याकरहरू समावेश छन् भने, तपाईं GitHub को लागी अप्ट इन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको काम सुविधाजनक ढ get्गले सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्फनी, जाजानो, र रुबी इन रेल्सले यो सेवा नयाँ प्रोजेक्टहरू विकास गर्न र टाढाका कामदारहरूको योगदानको लागि प्रयोग गर्दछ।
२. GitHub उद्यम:
GitLab र BitBucket जस्तै, GitHub इन्टरप्राइज ठूलो आकारको उद्यमहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। यसले प्रोग्रामरहरू र विज्ञहरूलाई तिनीहरूको भण्डारहरू कर्पोरेट फायरवाल पछाडि होस्ट गर्न मद्दत गर्दछ।
मार्कडाउन एक विशिष्ट पाठ सम्पादकको साथ कागजात लेख्ने अभ्यास हो। GitHub विकिस, टिप्पणीहरू र मुद्दा ट्र्याकरहरूलाई मार्कडाउनमा बदल्न सक्षम छ र यसैले तपाईंको काम सजिलो बनाउँदछ। अर्को शब्दहरूमा, यसको मतलब यो हुन्छ कि तपाईं यो सेवाको साथ पेशेवर कागजातहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईंसँग पर्याप्त प्रोग्रामिंग वा कोडिंग कौशल छैन भने, तपाईं अझै पनि GitHub पाठ कागजात शिल्प गर्न सक्नुहुन्छ।
Small. मध्यम देखि मध्यम आकारका कम्पनीहरूका लागि उपयुक्त:
GitHub सँग एक उत्कृष्ट कागजात छ। यो दुबै साना र मध्यम आकारका कम्पनीहरूका लागि उपयुक्त छ। GitGub सेक्सनमा, तपाई उपयोगी लेख र ट्रेंडिंग शीर्षकहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। के तपाइँ Git कार्यप्रवाह कसरी सिर्जना गर्ने जान्न चाहानुहुन्छ? तपाईले यसको ब्लग पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ यस सम्बन्धमा सबै चीज थाहा पाउन। GitHub केही महिना अघि Gist प्रस्तुत गर्‍यो। जिस्टको साथ, तपाईं गिट रिपोजिटरीमा सजिलैसँग फरक फाईलहरू बदल्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, Gist तपाईंको साझा गर्न र तपाईंको कन्फिगरेसन फाइलहरू र स्क्रिप्टहरूमा परिवर्तन ट्र्याक गर्न सजिलो बनाउँदछ। Gist ले Pastebin को सरल अवधारणामा बनाउँदछ र कोड स्निप्पेटहरू र निजी टाँस्नको लागि SSL ईन्क्रिप्शन थप गर्दछ।
G. GitHub बजार सेवा:
GitHub ले यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई बजार सेवाहरू पनि प्रदान गर्दछ। सब भन्दा महत्त्वपूर्ण सेवाहरू तल उल्लेख गरिएको छ:
Oll रोलबार - GitHub वास्तविक समय डिबगिंग उपकरण प्रदान गर्दछ र रुबी, Node.js, PHP, नेट, जाभास्क्रिप्ट, पाइथन, एन्ड्रोइड, C ++, आईओएस, गो र जाभा संग उपयुक्त छ।
• Codebeat - यो विकल्प कोड विश्लेषणको लागि राम्रो छ। समर्थित भाषाहरू गो, एलेक्सिर, जाभा, पाइथन, जाभास्क्रिप्ट, स्विफ्ट, रुबी, कोटलिन, टाइपस्क्रिप्ट, र उद्देश्य-सी हुन्।
V ट्राभिस सीआई - यसले तपाईंलाई गीटहब वातावरणमा पूर्ण नियन्त्रण दिन्छ र वेब सामग्रीलाई विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गर्ने टोलीहरूको लागि विकसित गरिएको हो।
• GitLocalize - GitLocalize तपाईंको GitHub भण्डारको साथ समन्वयन गर्दछ र तपाईंको कामको रेकर्ड राख्न मद्दत गर्दछ।